Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » Njem nlegharị anya Caribbean na -eme nke ọma karịa ụwa ndị ọzọ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị bịarutere Caribbean gbadara 30.8 pasent n'ime ọnwa ise mbụ nke 2021, dị ala nke ukwuu karịa nkezi zuru ụwa ọnụ nke pasent 65.1
Ebe ndị njem nlegharị anya nke Caribbean na -aga n'ihu na njem ha gaa n'ụdị ụfọdụ nke ịdị adị.
Ọ bụ ezie na ndị bịarutere njem nlegharị anya gara n'ihu na-agbada ọnụ ọgụgụ ọrịa na-efe efe, ọkara ọkara afọ gara aga kwalitere site na nkeji nke abụọ.
Ka ọ na -erule ngwụsị ọnwa Mee, ndị bịarutere nọ na nde 5.2, gbadara 30.8% maka oge kwekọrọ na 2020, dị nnọọ mma karịa nkezi zuru ụwa ọnụ nke ọdịda 65.1%.
Ka ebe ndị njem nlegharị anya nke Caribbean na -aga n'ihu na njem ha na -adịkarị ka o siri dị, data mbido sitere na mba ndị so na Caribbean Tourism Organisation (CTO) na -ekpughe na mpaghara ahụ karịrị ụwa ndị ọzọ na ọkara mbụ nke 2021.
Neil Walters, onye osote odeakwụkwọ ukwu nke CTO
N'ime oge a, ndị njem mba ofesi bịarutere Caribbean ruru nde 6.6, na -anọchite anya mbelata pasent 12.0 ma e jiri ya tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga. Ka ọ na -erule ngwụsị ọnwa Mee, ndị bịarutere nọ na nde 5.2, gbadara pasent 30.8 maka oge kwekọrọ na 2020, dị mma karịa nkezi mba ụwa nke mbelata pasent 65.1. N'ime mpaghara nyochachara, America, nke gụnyere Caribbean, debara aha ọdịda 46.9, ma ọ bụghị ya, ọ nweghị mpaghara ọzọ mere nke ọma karịa ọdịda pasent 63 nke ndị bịarutere.
Ọ bụ ezie na ndị njem nleta na-aga n'ihu na-agbada ọnụ ọgụgụ ọrịa na-efe efe, ọkara ọkara afọ gara aga kwalitere site na nkeji iri na ise mgbe nleta ndị njem nleta na abalị. Caribbean wulitere n'etiti ugboro iri na ugboro iri atọ karịa nke dị n'ọnwa ndị kwekọrọ na 37. N'ikwu ya n'ụzọ zuru oke, enwere nkwalite na -aga n'ihu, ebe ọnụọgụ mbata rịrị site na otu nde n'ọnwa Eprel ruo nde 2020 n'ọnwa Mee ruo nde 1.2 na June, dịka data achịkọtara. site na ngalaba nyocha CTO.
N'ime ihe kpatara nkeji nke abụọ siri ike bụ ịrị elu nke njem si n'ahịa mbụ nke mpaghara ahụ, United States, nke nleta ndị njem ruru nde 4.3 na ọkara mbụ nke afọ, mmụba pasent 21.7. Ihe ndị ọzọ so kpata gụnyere gụnyere ịbelata ụfọdụ mmachi njem na mmụba nke ụgbọ elu.
Neil Walters kwuru, "Ihe ndị a bụ ihe ịrịba ama na -agba ume na ịrụsi ọrụ ike nke mba ndị otu anyị iji mee mgbanwe maka ọnọdụ na -agbanwe agbanwe nke ọrịa na -amalite ịkwụ ụgwọ." Ismtù Njem Caribbean Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ CaribbeanOnye na -eme odeakwụkwọ ukwu. “Ọbụlagodi ka anyị na -anabata echiche mgbake na ohere nke ọrịa na -efe efe nyere anyị, anyị ga -aga n'ihu na -eburu n'uche nsogbu ndị anyị na -eche ihu ugbu a yana ihe ịma aka nwere ike ịbụ ọnọdụ siri ike dịka ọrịa nwere ike ibute. A maara mpaghara njem nlegharị anya nke Caribbean ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na -eme ihe ike n'ụwa. "